Hlola iSanta Cruz, iTenerife - World Tourism Portal
Hlola Santa Cruz, Tenerife
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeSanta Cruz
Bukela ividiyo ekhuluma ngoSanta Cruz
Hlola iSanta Cruz inhloko-dolobha nedolobha elikhulu kakhulu Tenerife. Futhi inhloko-dolobha ye eCanary Islands, kanye I-Las Palmas.
ISanta Cruz de Tenerife isendaweni engasempumalanga yesiqhingi saseTenerife, indawo enkulu kunazo zonke ketane Island. Isigceme sikaMasipala sihlanganisa indawo yamakhilomitha-skwele angama-150.56 futhi ihlukaniswe yaba yindawo ehlukaniswe kabili: i-Anaga Massif nerempu yaseningizimu eyakhiwa yi-lava flows ehla ukusuka esiqongweni se-Acentejo iya ogwini. Ukuphakama okuphezulu endaweni yesele ngamamitha we-750 ngaphezu kwezinga lolwandle. Ngaphezulu kwengxenye yomngcele kamasipala ugu.
Ngaphambi kokufika kwabanqobi baseCostilian, indawo lapho kwakuzokwakhelwa khona idolobha, kwakukhona izitshalo zezitshalo zasendle eziphathelene ne-menceyato (umbuso) wase-Anaga, eyayilawula iMencey Beneharo. Umlando wangaphambi kwe-Hispanic wedolobha wenziwa ngefa lama-guanches (avela kuGuan Chenech, okusho ukuthi 'indoda evela eTenerife') kanye nokuphuma okuningana okwakwamanye amazwe okufika ogwini. E-1494, kolunye loluhambo, amaCastilians afika futhi asungula eSanta Cruz izisekelo zokukhempa zokunqotshwa kwesiqhingi ezaqhubeka kuze kube yi1496, unyaka lapho iTenerife yafakwa eCorona of Castile.
Kusukela ekuqaleni, ingosi yezomnotho yedolobha yayigxile ethekwini. I-wharf yokuqala, eyakhiwa e-1548, yayitholakala ogwini lwe-Añazo, kepha yabe isibhidlizwa ngokuhamba kwesikhathi kwaba nesivunguvungu. Isikhumulo samanje sihambelana namaphuzu amane amadala amadokodo asogwini lomasipala: itheku lamaHorses elinomfula wabaNsundu, umfudlana weBlas Diaz, iSiteji Esiphezulu neBufadero. Ichibi laseSanta Cruz lalithokoziswa yilaba matilosi ngenxa yezinzuzo zalo zemvelo okulijike laba yindawo yokudla yokudla yemikhumbi eya e-New World.
Ekupheleni kwekhulu le-15th umphakathi oshubile waqala ukwakha, wahlanganiswa amasosha, amatilosi omdabu, abathengisi kanye nama-guanches. Izindawo zokuqala zokwakhiwa kwabantu zazendaweni ezungeze inqaba yaseSan Cristóbal, indawo eyayivikela leli dolobhana. Engxenyeni yesibili yekhulu le-XVI, umuntu waqala ukwakha isihlalo sokuqala, esasiphambi kwendlu yenqaba, eyayizokwenza isihlalo sobukhosi sikaPila futhi sihambisana nesihlalo samanje samaCandlemas. Kwakhiwa izinqaba ezintsha zokuzivikela ezindaweni ezigudle ugu ngoba abantu baseSanta Cruz kwakumelwe bazivikele ekuhlaseleni okuvame ukwenziwa ngabazimele kanye nabaphangi, iGallic nesiNgisi. Kuze kube yilapho iBritish Navy, ne-Admiral Nelson ngaphambili, yawa yahlula i-25 ye-1797 Julayi. Lesi siqephu, ngokubaluleka kwaso, sizophawula umlando wedolobha.
Kunezikhumulo zezindiza ezimbili ezahlukene eTenerife.
I-Tenerife South Reina Sofia International Airport itholakala cishe nge-60km ukusuka eSanta Cruz, eningizimu yeTenerife. Kuvulwa amahora we-24 wosuku ngabagibeli abacishe babe yizigidi ezingama-9 minyaka yonke.
Lesi esinye isikhumulo sezindiza i-Tenerife North Los Rodeos International Airport esiseduzane nenhloko-dolobha besinqunyelwe kuphela izindiza eziqhingayo nezabantu bonke, kepha ukuvulwa kwakamuva kwesikhumulo sezindiza esisha kanye nokungena ezindizeni zamazwe omhlaba kuye kwavumela ukuthuthuka kokuxhumana nezwe lonke. naphesheya kwezilwandle.
Amabhishi angaphansi kakhulu kunaseningizimu. Okukhulu kunayo yonke iLas Teresitas yenziwa ngesihlabathi esiphuzi esingenisiwe kanye nokuhamba ngebhasi ngemizuzu emincane ye-20 ngebhasi.
I-Las Gaviotas ethule iyibhishi elilandelayo futhi ifaka isihlabathi esimnyama nenqwaba yabanqunu. Leli bhasi elingajwayelekile linikeza ukubukwa okumangazayo kweLas Teresitas.
Umlando omuhle wemvelo (uMuzio de la Naturaleza y el Hombre) umnyuziyamu osohamba ngemizuzu emihlanu ukusuka esiteshini sebhasi. Inezinsalela zomuntu ezenziwe mummified ezitholakalayo.
igalari yobuciko edolobheni
isikhungo esincane sesayensi yezamaplanethi esendleleni eya eLa Laguna.
Imakethe enkulu yangeSonto eduze kwesiteshi sebhasi.
Imnyuziyamu yamahhala emlandweni wesakhiwo sangaphambili esivele sangcwatshwa ngaphansi kwepaki yezimoto ePlaza Espana, iseceleni kwetheku lesikwele futhi ivulwa kusukela 10am ngoMsombuluko-Mgqibelo. Kuyathakazelisa ngolwazi oluningi ngomlando wedolobha.
I-Carnival yeSanta Cruz de Tenerife. I-Carnival yeSanta Cruz de Tenerife ingenye yemicimbi emikhulu futhi emangalisa kakhulu yohlobo lwayo eMhlabeni. Njalo ngoFebhuwari, uSanta Cruz de Tenerife, inhloko-dolobha enkulu kunayo yonke yeziQhingi zaseCanary, ibamba lo mcimbi ongokomlando, eheha abantu abacishe babe yisigidi abavela yonke indawo. hlela
Kunezitolo ezimbili zomnyango i-El Corte Ingles ezithengisa konke okuhle, kanye nezindawo zokuthenga ezihlukene emaphethelweni. Imakethe enkulu ikufanelekele ukuvakashelwa, yize ingahloswanga kubavakashi - izithelo ezinhle, i-veg, izimbali, njll. Kukhona imakethe yezindiza ngeSonto esiseduzane nesiteshi sebhasi, uma ngabe unesifushane. Ezinye izivakashi zikagesi eziseduze kwesikwele esikhulu, okungenzeka ukuthi zigwenywa kangcono.
Uma useholidini, kunokuningi empilweni kunokuthenga. Yini ungahambi uzungeze ipaki elihle phezulu yiRambla esikhundleni salokho?
Ukudla kwamaCanada, ukudla kwaseSpain futhi ngokungenakuvinjwa, ukudla okusheshayo. Izindawo eziningi ziyinani elihle, kodwa isicupho esisodwa noma ezimbili zabavakashi eduze kwetheku. Izinhlanzi eziningi ezidliwayo, isichazamazwi zingaba usizo.
Amabha amaningi ahlanganisiwe emigwaqweni egijimayo i-esplanade enkulu kanye nendawo yabahambi ngezinyawo ezungeze iPlaza Espana.